Jọ tụrụ ka ndị ọrụ nchekwa wakporo ụlọ ọkaiwu IPOB dị na Ejiofor, Anambra
Na Sọnde, ndị Indigenous People of Biafra (IPOB) dọrọ ndị gọọmentị etiti na ndị agha Naịjirịa aka na ntị ka ha kwụsị ịkpagbu ndị aka ha dị ọcha na South East, tinyere ndị ọkaiwu IPOB, ma ọ bụghị na nsogbu ga-apụta.
Warningdọ aka na ntị a sitere na mbuso agha a wakporo n'isi ụtụtụ Sọnde n'ụlọ onye ọkaiwu ya, bụ Maazị Ifeanyi Ejiofors, na Oraifite, nke okpuru ọchịchị ime obodo Ekwusigo, Anambara Steeti, site na ndị otu ndị uwe ojii na ndị agha Nigeria.
Dabere na nkwupụta nke onye mgbasa ozi mgbasa ozi na mgbasa ozi nke IPOB, Emma Powerful, ndị uwe ojii na ndị agha jikọtara ọnụ sitere na ndị agha Nigeria wakporo ma gbaa obodo Ejiofor gburugburu gburugburu n'ihe dịka elekere 2.15 nke ụtụtụ Sọnde, na-agbapụ oge ụfọdụ dịka ha mere na Disemba 2, 2019 , na-ebo ebubo na ọtụtụ ndụ nwere ike ịla n'iyi na nso nso ụnyaahụ wakporo ụlọ Ejiofor n'ụlọ Oraifite.
Dabere na nkwupụta IPOB, Maazị Ejiofor mere ka ndị ndu IPOB mara ihe dị ka elekere 2.15 nke ụtụtụ na ndụ ya nọ n'ihe egwu, ebe otu ndị uwe ojii na ndị isi ndị agha nọ n'ụlọ ya ugbu a na-agba egbe oge ụfọdụ na-achọ ịhụ ya.
Ndi IPOB mara okwu Ejiofor dika “Alert- Otu ndi uwe ojii jikotara onu na ulo m no na ulo m ugbua, na agba egbe oge ufodu n’uzo ijide m. Dị ka ọkàiwu, emeghị m iwu ọ bụla. Ndu mu nọ l'imigwe; a na-egbu ndị mmadụ, amaghịkwa m ihe ga-eme m ọzọ. ”
Okwu IPOB kwuru, gụpụtara n’akụkụ ya, “N’ime elekere abụọ na ọkara nke ụtụtụ, ndị uwe ojii na ndị agha jikọtara ọnụ gbara ụlọ Barrister Ifeanyi Ejiofor gburugburu. Ọ bụ mpụ na mmadụ ime dị ka onye ọkaiwu IPOB? Barrister Ejiofor na-arụ ọrụ iwu ya n'ụwa ebe a ga-akpagbu onye ọkaiwu maka ịnọchite anya otu nzukọ dịka ọkaiwu ha.
“Na abali abuo nke onwa nke iri na abuo n’onwa nke abuo na iri na ano, ndi agha ndi agha nke ndi agha nke ndi agha na mba Nigeria batara ma gbaa oku n’ulo ya, gbue ihe kariri mmadu iri Kemgbe ahụ, ha nọ na-akparị ma na-enye ya nsogbu. Worldwa dum ga-anụrịrị nke a, dịka gọọmentị Naịjirịa ga-enwerịrị ihe ọ chọrọ n’aka IPOB.
“Ndị ọchịehi Fulani Jihadist batara n’ụlọ Barista Ejiofor bụ ndị chọrọ igbu ya. Mustwa ga-anụ maka arụrụala nke obodo a na ndị ọrụ nchekwa ya. Onweghi onye kwesiri ịkatọ IPOB maka njide ejidere ọka iwu anyị bụ Ejiofor n’aka ndị agha Naịjirịa. Nye ndị maara ihe, ụwa ezuola. Ndịda-ọwụwa anyanwụ alaghachitabeghị ịda site na mbibi ogbugbu ndị ọrụ nchekwa Naịjirịa gburu Ikonso.
"Anyị na-agba ndị Gọvanọ South-East ume ka ha kpọọ ndị agha Naịjirịa na-arụ ọrụ na Steeti ha ka ha nye iwu, n'ihi na ha ga-ebu oke nke igbu ọchụ, iyi egwu, na iyi egwu nke ndị ntorobịa South-East na ndị ọkachamara na-arụ ọrụ ha kwesịrị ekwesị."
Schoolslọ akwụkwọ na-ekwupụta mmechi mberede, ebe ndị ọzọ ka na-emeghe, ebe ndị bi na ụjọ na-atụ IPOB nọdụ-n'ụlọ Nwere ike 28, 2021
N’agha egbe ha na ndị agha Naịjirịa nwụrụ, ndị ọchịehi Boko Haram si mba ofesi nwụrụ Nwere ike 4, 2021
Ndị IPOB dara ngwụrọ site n ’ọnụ ụlọ ịnọ n’ụlọ Nwere ike 31, 2021
Onye ọkaiwu kọwara etu ndị agha si gbuo onye ọchụnta ego Imo n'ihi imebi iwu okporo ụzọ Nwere ike 12, 2021
Tags:steeti anambra, ọnọdụb, ọkaiwu, oruifite